Lokhu ukwephulwa kwemisebenzi yakhe, ukuzibophezela kwakhe kumkakhe kuchazwa ukuthi owokugcina umdinisile umculi wabo, kusolwa udadewabo kuKristu. Yikuphi ukudlwengula kwesifungo sokwethembeka kokwethembana? Futhi yisiphi lesi sigaba salo mjaho wamaKristu ongasinikeza labo abafuna ukulandela indlela engokomoya?
Kulungile ukuthi noma ngubani osebenzisa inkonzo noma esebenza inkonzo engcwele futhi ophethe imikhosi yezinkolo zenkolo uyisibonelo nakwabanye.
Ukungathembeki, ukungathembeki nothando oluqotho kumkakhe noma kumyeni wakhe kuyicala, ngoba ukuqamba amanga othandweni kubhekwa njengokubulala / ukuzibulala. Abahlabeleli bamaqembu kufanele baqine ebudlelwaneni bobuKhristu. Ukuya ocansini kwe-cantor kuKristu kufanele kungavunyelwe. "Ngakho-ke, uphi uNkulunkulu kaMose noma ka-Abrahama kulezi zenzo ezingenasizotha! "
I-Oct20 07: 28